सरकारले असार १९, २३ र २४ गते गरेका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।
प्रवक्ता बास्कोटाका अनुसार सर्लाही घटनाका मृतक सरोजनारायण सिंहको परिवारलाई राहतस्वरूप १० लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । त्यस्तै आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको सरकारी अस्पतालमा उपचार गराएको खर्चको प्रमाणित बिलबापतको रकमसमेत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले विद्युतीय बस खरिद गर्न साझा यातायातलाई स्वीकृति दिएको छ । ऐतिहासिक बागदरबारको संरक्षणका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार उक्त दरबारको वास्तुकला, प्रविधि, वास्तुकृति र स्वरूपको मौलिकतालाई कायम राखी पुनर्निर्माण, पुर्नर्थापनाको विषयमा अध्ययन र विश्लेषण गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न पुरातत्व विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको चुक्ता पूँजी ८ अर्ब रूपैयाँ रहेकामा नेपाल सरकारले विश्व बैंकसँग गरेको प्रतिवद्धता पूरा गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट १ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ निकासा दिई र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २० करोड रूपैयाँ लगानी गरी कोषको चुक्ता पूँजी १० अर्ब रूपैयाँ पु¥याउन स्वीकृति दिइएको छ ।
संघीय वित्त व्यवस्थापनका लागि नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्दै दिगो आर्थिक वृद्धि र गरिबी निवारणमा योगदान पु¥याउने क्रममा नेपाल सरकारलाई विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण ऋण सहायताको रूपमा प्रस्तावित १०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
त्यस्तै, रसुवास्थित माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीलाई आयकर छुट दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । बैठकले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
‘दिनभर बीपी, रातभर विप्लव !’
सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपालाई हेर्ने दृष्टिकोण स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका छन् । बिहीबार नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा मन्त्री बास्कोटाले कांग्रेससँग विप्लव समूहबारे धारणा माग गरेका हुन् ।
उनको प्रश्न थियो, “हिंसाप्रति कांग्रेसको धारणा के हो ? दिनभर बीपी, रातभर विप्लव ? चार तारामा शान्ति र लोकतन्त्रका तारा कता हराए ?” मन्त्री बास्कोटाले विप्लव समूहले गरिरहेको हिंसाको सहारा लिएर नेपाली कांग्रेसले सरकारमाथि प्रश्न उठाउने काम गरिरहेको बताए । संविधान, कानुन र शान्तिका विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले विप्वल समूहलाई किन काखी च्यापेको भनेर उनले प्रश्न पनि गरे ।
भोजपुरमा चन्द समूह र प्रहरीबीचको झडपमा परी बुधबार बिहान दुवै पक्षका दुई जनाको मृत्यु भएको थियो । सोही घटनालाई लिएर नेपाली कांग्रेसले सरकारले ‘मृत्युको व्यापार’ गरिरहेको आरोप लगाएको थियो । त्यसप्रति टिप्पणी गर्दै मन्त्री बास्कोटाले नेपाली कांग्रेसले कानुन, संविधानविपरीत हिंसात्मक गतिविधिलाई साथ दिएको दाबी गर्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
मन्त्री बास्कोटाले चन्द समूहका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेलको हत्याको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन नहुने जिकिर गरे । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सो हत्याकाण्डको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न माग गर्दै संसद बैठक अवरोध गरिरहेको छ । मन्त्री बास्कोटाले संसदीय समितिले छानबिन गर्दैमा सो समस्या समाधान नहुने दाबी पनि गरे ।
‘मन्त्रीलाई लगाम लगाउनुस्’
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाको अभिव्यक्तिलाई लिएर कडा प्रतिक्रिया दिएका छन् । बिहीबार नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा विप्लव समूहबारे कांग्रेसको धारणा माग्दै ‘दिनभर बीपी, रातभर विप्लव’ भनेपछि कांग्रेसले आपत्ति जनाएको हो ।
कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता बास्कोटालाई सम्हाल्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आग्रह गरेका छन् । शर्माले ट्विटरमा लेखेका छन्, “प्रधानमन्त्री नै जब असंसदीय शब्द बोल्नुहुन्छ संसद्मा, तब कुनै फोटोकपी मन्त्रीसँग संस्कारको अपेक्षा कसरी गर्नु ? अराजनीतिक बोलीको जवाफ दिँदै हिँड्नु उचित हुन्न । भनाइ छ हलेदो भनेर चिनिसकेपछि धेरै कोट्याउनु हुन्न ! लगाम उपहार पठाउँ कि सम्हाल्नुहुन्छ आफ्ना मन्त्री ?”